प्रदेशको राजधानी हेटौडै चाहिन्छ भन्दिनँ : मुख्यमन्त्री पौडेल – Merokarnali
प्रदेशको राजधानी हेटौडै चाहिन्छ भन्दिनँ : मुख्यमन्त्री पौडेल
मेरो कर्णाली । २०७६, २३ श्रावण बिहीबार मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो घर हेटौंडामा भए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडामै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् ।
प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी नुवाकोट वा रामेछापमा बनाए पनि आफूलाई आपत्ति नहुने तर, काठमाडौंमा चाहिँ कुनै हालतमा प्रदेशको राजधानी राख्न नहुने मुख्यमन्त्री पौडेलको तर्क छ ।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सिंहदरबारको छायाँमा प्रदेशको राजधानी बनाउन नहुने जिकिर गरे ।
तर, म एउटा कुरा के प्रष्ट पार्छु भने राजधानीका विषयमा मेरो आफ्नो लजिक छ । जबर्जस्त लजिक छ । त्यो के हो भने मैले हेटौंडै चाहिन्छ भन्दिनँ, तर राजधानी यो राजधानीमा (काठमाडौं) मा हुँदैन । यो मेरो निर्णय हो । यो सिंहदरबारको छायाँभित्र आएर प्रदेशको राजधानी बस्दैन ।
सिंहदरबार यहीँ छ । हामी २०/२५ वर्षसम्म केमा लडियो भने राजधानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? राजधानीका जनतालाई कसरी डाइभर्ट गर्ने ? यो पपुलेसनलाई हामीले कसरी बाहिर लैजान सक्छौं ? कसरी बाहिरको क्षेत्रलाई विकास गर्ने ? यी सबै मान्छे काठमाडौंमा आउने र काठमाडौं अस्तव्यस्त शहरको रुपमा रुपान्तरण हुने कुराको अन्त्य गर्न सबभन्दा पहिले राजधानीको पपुलेसनलाई डाइभर्ट गर्नुपर्छ । यो एउटा वैज्ञानिक आधार हो । अब २०/२५ वर्षसम्म यिनै कुरा गरेर म आएँ । अब फेरि राजधानीलाई ल्याएर काठमाडौंमै राख्नुपर्छ भनेर मैले भनें भने मेरो २० वर्षको इतिहास, मैले जे कुरा गरें, जे लगानी गरें, त्यो खेर जान्छ । त्यो हुँदैन ।
अर्को पक्ष के हो भने म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । २०१७/०१८ सालमा राजा महेन्द्रले बनाएका जिल्ला सदरमुकामहरु हेर्नुहोस् । प्रशासनिक भवनहरु हेर्नुहोस् । मेचीदेखि महाकालीसम्म जानुभयो भने जम्मै बोर्डर साइडमा छन् ।
किन तल–तल, तल–तल ? मास्तिर राखेको भए पनि हुन्थ्यो नि । चन्द्रनिगाहपुरमा नराखेर किन गौरमा राखियो ? सप्पै हेर्नुहोस् बोर्डरमा छन् । यसको अर्थ त्यो स्ट्राटेजीकल्ली पनि, सरक्षाको हिसाबले, हरेक हिसाबले भन्ने पनि एउटा तर्क हो ।
त्यसैले राजधानीजस्तो विषयलाई मैले भनेर त हुने हैन, हामी दुई/चार जनाले भन्नुभन्दा पनि सिंगो यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको वीचमा एउटा सहमति भयो भने हुन्छ । किनभने यो त दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने, दीर्घकालीन असर पार्ने कुरा हो ।
मेरो व्यक्तिगत इन्ट्रेष्टका आधारमा राजधानी रोकिएको हैन । हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं । अगाडि जान्छ र तपाईहरु सबैले केही दिनभित्र अब राजधानीको नाम र स्थायी राजधानीको ठाउँ पनि सुन्न पाउनुहुनेछ ।
हामीले यो सामग्री अनलाइनखबर बाट लिएका हौ ।